आमाबुवाको राम्रो स्याहार गर्ने दम्पत्तीलाई अब नगरपालिकाले दिन्छ पुरस्कार – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/आमाबुवाको राम्रो स्याहार गर्ने दम्पत्तीलाई अब नगरपालिकाले दिन्छ पुरस्कार
टीकापुर । बृद्ध सेवा समिति टीकापुरले आमाबुवाको राम्रो स्याहार तथा हेरचाह गर्ने दम्पतीलाई पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ । समितिले ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाहमा सन्तानलाई जिम्मेवार बनाउन पुरस्कार व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
समितिका अध्यक्ष मोहनबहादुर रावलले आमाबुवाको स्याहार तथा हेरचाह गर्ने सन्तानलाई सम्मान तथा पुरस्कारका लागि आफ्नो व्यक्तिगत रकमबाट रु पाँच लाखको अक्षयकोष स्थापना गर्नुभएको छ ।
“आमाबुवाको राम्रो स्याहार गर्ने सन्तानलाई प्रेरणा दिन यस पुरस्कार स्थापना गरिएको हो । कोषको ब्याजबाट आउने रु ५० हजार पुरस्कार दिइनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “जेष्ठ नागरिकको सम्मान, स्याहार भएन । सन्तान जिम्मेवार नबन्दा धेरैले दुःख पाएका छन् । आमाबुवाप्रतिको जिम्मेवारी बोध गराउन पुरस्कार दिने व्यवस्था गरेका हौँ ।”
वृद्ध सेवा समितिले यसबाहेक ज्येष्ठ नागरिकको हकहित तथा सेवामा समर्पित संस्था वा नागरिक र ज्येष्ठ नागरिकका हितमा कलम चलाउने पत्रकारलाई समेत वर्षेनी पुरस्कारको व्यवस्था गरेको छ । समितिले रु १०÷१० हजार पुरस्कारको व्यवस्था गरेको अध्यक्ष रावलले जानकारी दिनुभयो । “ज्येष्ठ नागरिकप्रति समाजलाई जिम्मेवार बनाउन ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी समाचार लेख्ने एक जना पत्रकारलाई पनि पुरस्कार दिने भएका छौँ”, उहाँ भन्नुहुन्छ, “हाम्रो एउटै उद्देश्य ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह होस् भन्ने हो ।”
समाजसेवी कण्ठराज गिरी वृद्ध सेवा समितिले ज्येष्ठ नागरिकको हकहितका क्षेत्रमा गरेका कार्य सराहनीय रहेको बताउनुभयो । “हामीले समस्यामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकलाई स्याहार्ने वातावरण बनाउन आवश्यक छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हामी काम गर्नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकलाई आयआर्जनमा लगाउने नयाँ कामको थालनी गर्ने योजनामा छौँ, त्यसका लागि स्थानीय सरकारसँग पहल भइरहेको छ ।”
टीकापुर नगरपालिका– १ का वडाध्यक्ष गङ्गाराम आचार्यले नगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिकका क्षेत्रमा हुने कार्यक्रममा वडाले सहकार्य गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । “वृद्ध सेवा समितिसँगको सहकार्यमा हामीले वर्षेनी सयाँै ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मान गर्ने गरेका छौँ ”,उहाँले भन्नुभयो, “समितिले योजना ल्याएमा नगरपालिका कार्यक्रम दिन तयार छ । ”
यो अर्को समाचार, युरिया मलको चरम अभाव
कञ्चनपुर । एक महिनादेखि कञ्चनपुरमा युरिया मलको चरम अभाव हुँदा किसान चिन्तित बनेका छन् । धानरोपेकोे २१ दिन भित्रमा युरिया मल हाल्नुपर्ने भए पनि यहाँका किसानले मल नपाउँदा समस्या भइरहेको गुनासो गरेका छन् ।
“यहाँको दक्षिण क्षेत्रको सीमानाकाबाट लुकिछिपी मल आइरहेको सुनिन्छ”, शुक्लाफाँटा नगरपालिकाका दीना रानाले भन्नुभयो, “एक हजारमा पाउने मल रु एक हजार ७०० मा पनि पाउन मुश्किल छ ।”
त्यसैगरी महाकाली नगरपालिकाको सीमानाका हुँदै महाकाली नदीको झोलुङ्गे पुलबाट मल आइरहेको भए पनि बिक्रीवितरणका विषयलाई लिएर विवादसमेत उत्पन्न भएको थियो । स्थानीयबीच विवाद भएयता सो नाकाबाट पनि मल आउन छाडेको स्थानीयको भनाइ छ ।
कृषि ज्ञान केन्द्रले पनि कैलाली र कञ्चनपुरमा युरिया मल अभाव हुँदा उत्पादनमै कमी आउसक्ने बताएको छ । केन्द्रका निमित्त कार्यालय प्रमुख रामचन्द्र भट्टले मल नपाउँदा किसानले दुखेको पोख्ने गरेको बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार कैलालीमा ७० हजार र कञ्चनपुरमा ४८ हजार हेक्टरमा धानखेती हुँदै आएको छ । “मल अभाव नौलो विषय होइन”, उहाँले भन्नुभयो, “अनौपचारिक नाकाबाट पनि यहाँ ३० प्रतिशत मल आयात हुन्थ्यो तर पनि बन्दाबन्दीले आउन छाडे पनि चरम अभाव देखिएको हो ।” उहाँले युरिया मल धान लगाएको २१ दिन र त्यसपछि पुनः २१ गरी दुईपटक हाल्नुपर्ने बताउनुहुन्छ । “यहाँले मल नपाउँदा नै उत्पादनलाई असर गर्ने देखिन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मल अभाव मुलुकभरकै समस्या हो ।”
त्यसैगरी कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड कञ्चनपुरले युरिया मल सकिएको महिना दिन भइसकेको जनाएको छ । “ करिव ४३ टन डिएपी र ४६ टन पोटास मल मात्रै हामीसँग मौज्दात छ”, लिमिटेड प्रमुख बलबहादुर शाहले भन्नुभयो, “मलका लागि बिहानदेखि साझँसम्म किसान यहाँ धाइरहन्छन् ।”
लकडाउनका बेला आपूर्तिमा सहज नहुँदा यहाँका केही सहकारीलाई भैरवाबाट मल ल्याउन दिइएको छ । “हामीले गत आर्थिक वर्षमा सहकारीबाट समेत गरेर दुई हजार ७३६ मेट्रिकटन मल बिक्री वितरण ग¥यौँ”, उहाँले भन्नुभयो, “मलको समस्या अहिले राष्ट्रिय समस्याकैरुपमा देखिएको छ ।” गत आवमा लिमिटेडले एक हजार ९ सय १।७ मेट्रिक टन युरिया, एक हजार सात सय मेट्रिक टन डिएपी र ९५।२ मेट्रिक टन पोटास बिक्री गरेको थियो ।
हेर्नुहोस अबको आउन तयारी कपडाभित्रको सबै दृश्य समेत खिच्नसक्ने क्यामरा भएको मोबाईल आयो भिडियोसहित पुरा हेर्न फोटो मा किलिक गर्नु होला
नयाँ वर्षको दिन सोच्नै नसकिने गरि घट्यो सुनको मुल्य ! हेर्नुहोस कतिमा हुदैछ कारोबार
कन्चन र अनिशाको बारेमा दाइले खोले अर्को ड-रलाग्दो रहस्य, ?(भिडियो सहित)
समस्या बोकेर अब न्युज २४ जानु परेन, रवि लामिछानेको टीम तपाईंको घरमै आउँदै…